Jaamacadda Hodges waa la awoodi karaa! »Fiiri Waxbarashada iyo Khidmadaha
Heerarka Waxbaridda Jaamacadda Hodges iyo Khidmadaha
Ku soo dhowow Jaamacadda Hodges! Waxbarashada Hodges iyo khidmadaha ayaa sii wadaya inay noqdaan kuwa ugu hooseeya hay'adaha gaarka loo leeyahay ee gobolka Florida. Waxbarashada ayaa laga yareeyn karaa deeqaha waxbarasho, deeqaha, iyo qiimo dhimista waxbarashada. Amaahda federaalka iyo deeqaha, iyo sidoo kale kaalmada maaliyadeed ee gobolka ee waaxda waxbarashada, ayaa sidoo kale la heli karaa.
Aynu Si Dhab Ah u Helno - Maxaad Ka Ogaan Lahayd Qiimaha Waxbarshada Qarsoon ee Tufaaxa ah isbarbar dhigga
Ma ogtahay inay jiraan sharciyo kala duwan oo ku saabsan sida jaamacadaha dowliga ah iyo kuwa gaarka loo leeyahay looga baahan yahay inay ku dhajiyaan waxbarashadooda? Jaamacadaha bulshada waxaa loo oggol yahay inay soo dhigaan kharashka saafiga ah, oo badanaa loo yaqaan "In-State Tuition," halka hay'adaha samafalka ah ee gaarka loo leeyahay looga baahan yahay inay soo qoraan wadarta guud saacaddii lacagta wax lagu dhigto. Intaa waxaa sii dheer, jaamacadaha dawladu had iyo jeer ma cadeeyaan khidmadaha dheeraadka ah iyo kharashyada laga yaabo in lagu qiimeeyo ardayga markay isqortaan Hadaanu nahay Hodges, waxaan rabnaa inaan hubino in ardayda ay si cad u fahmaan qiimaha waxbarashada ay helayaan.
Ardaygu wuxuu isbarbar dhigayaa barnaamijka RN ee Hodges University iyo kuliyada bulshada. Isbarbardhigga madax-ilaa-madaxa, Hodges wuxuu umuuqdaa inuu ku kacayo kharash ka badan isla barnaamijkii. Waxa aanu ardaygu garanayn waa kuleejka bulshada oo bixiya shahaado laba sano ah oo RN ah halka Hodges uu siinayo loo shaqeeyaha uu doorbiday oo laga yaabo inuu u baahan yahay Bachelor's of Science in Nursing. Barnaamijkeenu sidoo kale wuxuu ka kooban yahay waxbarashada, buugaagta, sheybaarada, labiska, iyo stethoscope, halka kuleejka bulshada laga yaabo inay lacag dheeraad ah ka qaadaan waxyaalahan. Intaa waxaa sii dheer, in kasta oo labada barnaamijba ay u baahan yihiin koorsooyin shuruud ah, barnaamijkeenna waxaa lagu bixiyaa xawaare la dardargeliyay, oo lagu dhigayaa qaab yar oo fasal ah, waxaana la baraa saacadaha ay dadka waaweyn ee shaqeeya ka soo qeyb geli karaan.
Ardayga isbarbardhigaya Jaamacadda Hodges iyo jaamacadda dadweynaha ee 4-sano ah wuxuu arkaa xayeysiis ah, celcelis ahaan, $ 240 saacaddii amaah ee shahaadada koowaad ee jaamacadeed. Marka loo barbardhigo heerka Hodges 'ee la soo dhejiyay oo ah $ 595, tani waxay u egtahay heshiis fantastik ah, laakiin aan wax yar ka sii qodno. Marka hore, sicirkaasi wuxuu khuseeyaa oo keliya haddii aad ku sugan tahay gobolka. Qiyaasta celceliska celceliska ardayda ka baxsan gobolka ee dhigta jaamacadda dadweynaha ee 4-sano ah, celcelis ahaan, waa qiyaastii $ 800. Jaamacadda Hodges, waxaad ka bixisaa isla lacagtii halkii saac oo deyn ah meel kasta oo aad adduunka ka joogto.
Heerka saldhigga Hodges waa $ 595, hase yeeshe asaasigayaga oo lagu daray afar nooc waxaad ka heleysaa 16 buundo qiimaha 12. Intaas waxaa sii dheer, haddii aad ku nooshahay gobolka Florida, waxaad si otomaatig ah ugu qalmi kartaa deeqda EASE, oo qiyaastii ah $ 1420 2020-2021. Tani waxay ka dhigan tahay inaad bixin karto waxyar sida $ 353.75 / saacaddii amaahda. Kadib, markaad ku darto biilasha GI, milatariga iyo qiime dhimista shirkadaha, barnaamijyada xargaha jaalaha ah, maalgelinta ilaha shaqada, deeqaha waxbarasho, Bright Futures, abaalmarinta Pell Grant, iyo deeqaha waxbarasho ee gudaha, ardayda qaar waxay bixiyaan wax aan badnayn haba yaraatee.
Aan ku xuso, jaamacad guud oo 4-sano ah, waxaad kaqeyb geli kartaa fasalo ilaa 200-350 arday ah oo uu baray arday ka qalin jabiyay labadii sano ee ugu horeysay. Hodges, tirada fasalkeennu waa celcelis ahaan 12-15 waxaana wax ku bara macallimiin abaalmarin ku guuleysatay oo leh khibrad dhab ah oo adduunka ah. Si kastaba ha noqotee, dareenka iyo taageerada aad hesho waxay noqon kartaa qodobka go'aaminaya guushaada.
Qof degan Florida iyo xubin firfircoon oo ilaalinaya Hodges
Heerka Jaamacadeed = $ 595 saacaddii amaahda x 12 FT Saacadaha Saacadaha = $ 7140– deeqda EASE oo ahayd $ 1420 xilli-dugsiyeedkiiba (($ 2841 sanadkiiba) = 5720.00
Waxaad sidoo kale ku heli kartaa 16 dhibco qiimahaas barnaamijkayaga Core + 4! $ 5720/16 Abaalmarinta = $ 357.50 - $ 250 Dhimista Milatariga Firfircoon = $ 103.75 saacaddii amaahda.
* Heerarka waxbarashadu way kala duwanaan karaan iyadoo ku saleysan duruufaha qofka iyo barnaamijkooda waxbarasho ee ay doorteen.
U oggolow Isuduwayaashayada Aqoonsiga Ogolaanshaha iyo Gargaarka Maaliyadeed inay kaa Caawiyaan Maalgelinta Mustaqbalkaaga Codso Maanta!
Lacagta Jaamacadeed ee Dhammaan Koorsooyinka Saacadda Saacadda: $ 595 saacaddii amaahda
Waxbarashada Qalin-jabinta ee Dhammaan Koorsooyinka Saacadda Saacadda: $ 830 saacaddii amaahda
Ingiriisiga oo ah Barnaamijka Luuqadda Labaad: $ 295 saacaddii amaahda
Koorsooyinka Ingiriisiga Intensive: $ 335 saacaddii amaahda.
Waxbaridda Ku-saleysan Wada-kooxeed:
Waxbarida Barnaamijka BSN ee Muhiimka ah: $ 17,200.00 kalfadhi kasta
Waxbaridda Barnaamijka BSDH Core: $ 17,200.00 casharkiiba
EMS Waxbarida Barnaamijka Muhiimka ah - Raad-raac 1: $ 10,166.67 kalfadhi kasta
EMS Waxbarida Barnaamijka Muhiimka ah - Raad-raac 2: $ 9,700.00 kalfadhi kasta
EMS Waxbarida Barnaamijka Muhiimka ah - Raad-raac 3: $ 9,183.33 kalfadhi kasta
EMS Waxbarida Barnaamijka Muhiimka ah - Raad-raac 4: $ 8,433.33 kalfadhi kasta
Casharka Barnaamijka MAcc Core: $ 9,966.67 kalfadhi kasta
Waxbarashada PTA ee Muhiimka ah: $ 10,933.33 casharkiiba
Waxbarashada PN ee Muhiimka ah: $ 36,980.00 kalfadhi kasta
CMHC Waxbarida Barnaamijka Muhiimka ah (Cohort - Track): $ 9,271.43 kalfadhi kasta
CMHC Waxbaridda Barnaamijka Muhiimka ah (Kooban) **: $ 830 saacaddii amaah ahaan
UPOWER Subs Diiwaangelinta Shahaadada Jaamacadeed **: $ 3,000.00 lixdii biloodba
UPOWER cription Diiwaangelinta Qalinjabinta **: $ 3,500.00 lix bilood
Maxaa Loo Doortaa Jaamacadda Hodges?
Qiyaasaha Heerarka Yaryar
Awoodda Qalin-jabinta oo la Dardargeliyay
Fursadaha Bixinta Barnaamijka Kala Duwan ee Noloshaada ku habboon
Manhaj ku-saleysan Shaqo-ku-saleysan oo Lagu Baray Barafasoor guuleysta
Taariikhaha Bilaha Bilaha
Qaado Hal Fasal Waqtiga Koorsooyinka Badankood
Bilow Sheekadaada # MyHodges Maanta!
Wax Ka Baro Gargaarka Maaliyadeed ee La Heli Karo, Deeqaha waxbarasho, Caawinta iyo Barnaamijyada Dhimista
Khidmadda Codsiga Qalin-jabinta: $ 50
Kharashka Adeegyada Ardayda: $ 250 kalfadhi kasta
Khidmadaha Buugaagta / Kheyraadka (marka aan lagu darin): $ 0 - $ 400 halkii koorso, kalfadhi kasta
* Wixii jadwal waxbarasho oo dhammaystiran iyo lacag bixin ah, oo ay ku jiraan qiimo dhimis, fadlan eeg hadda Shuruudaha Isdiiwaangalinta & Xaaladaha wixii macluumaad dheeraad ah.